Sh Cumar Faaruuq - Android app on AppBrain
All apps > Education > Sh Cumar Faaruuq
Jul 10, 2013 New App Version 1.3 in Education for Free
Tafsiirka Qur'aanka oo dhamaystiran halkan ka baro. Waxa uu kuu sahlayaa appkan in aad ka dhageysato casharada tafsiirka oo dhan. Waxaa akhriyey tafsiirkaan Sh Cumar Faaruuq (Alle haka siiyo ajar iyo xasanaad ).
Waxaan kaloo aan soo galinay Sh Maxamed Cabdu Umal Tafsiirkiisa oo dhamaystiran.
akhriyey appkan bismillaah cabdirisaaq cabdu casharada cumar dhageysato dhamaystiran faaruuq galinay jamac maanta mahadiisa maxamuud muddo sahlayaa shaqeynay soo tafsiirka tafsiirkaan tafsiirkiisa wakhti waxaan xasanaad
allah allaha asc mahad masha qeyr siiyo waa working الله
allah allaha cumar faaruuq mahad masha naxariisto qeyr waa الله
ajir asc hooshaan kartan kashaqeeyay mashaqeynayo qeer shaqeeynayo siiyo workinh